I-PostBOT, elona qabane lilungileyo elinokuba nalo ngeposi ngexesha lakhe | Iindaba zeGajethi
I-PostBOT, elona qabane lilungileyo elinokuba nalo ngeposi ngexesha lakhe
URuben inyongo | | Robotics
Iirobhothi ziya kuba ngamaqabane afanelekileyo abaposi. Inyani yile yokuba inkampani yaseFrance- ngoncedo lwabasebenzi beDeutsche Post- benze iirobhothi zokuqala ezinakho ukuhamba nabasebenzi bakarhulumente abavela kwiiposi ezahlukeneyo ezindleleni. Igama le le robhothi yiPostBOT.
Uluvo oluphambili kukwenza lula umsebenzi. Le PostBOT inendawo enkulu yangaphakathi. Ngapha koko, ukucacisa ngakumbi, ngaphakathi kuyo kuhlala izindlu ukuya kuthi ga kwiitreyi ezi-6 apho unokuhambisa yonke imeyile. Ngokufanayo, obona bunzima bunokuthwala ziikhilogram ezili-150, ke ayizukuphatha nje kuphela ukuphatha iileta, kodwa neephakeji. Kwaye kulapho ke mhlawumbi olu lwakhiwo lwenza eyona ngqondo.
I-PostBOT iyahambelana nazo zonke iintlobo zemozulu engalunganga; Oko kukuthi, hayi kuba kunetha, kuyabanda, njl. izakuyeka ukunika inkonzo. Inkampani yaseFrance "i-Effidence SAS", umyili woyilo, ukwazile ukudibana nabasebenzi abohlukeneyo beDeutsche Post ube nakho ukutshintsha irobhothi kwiimfuno zemihla ngemihla zomsebenzi. Ngamanye amagama, kufezekisiwe ukuba amandla anele usuku kunye nolawulo lwePostBOT lubekwe kakuhle ukunqanda ukwenza imeko yokungonwabi. Ngoku irobhothi inee-sensors zokulandela umkhondo weqabane lakho lomntu kwaye lilandele ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuqala kokumazi.
Uvavanyo lokuqala lokulinga luya kwenzeka kwisixeko saseJamani iBad Hersfeld (Hessen). Apho, usodolophu ubonakalise umdla kolu vavanyo kuba bezama ukwenza iprojekhthi yesixeko okanye Smart City. la Uvavanyo lokulinga luya kuhlala iiveki ezi-6. Emva koku, yonke idatha eqokelelweyo iya kuvavanywa kwaye ukuphuculwa kokusebenza kwerobhothi yeposi kuya kwenziwa. Emva koku, ukusuka kwiDeutsche Post baqinisekisile ukuba umjikelo omtsha wovavanyo kunye novavanyo luya kuqhubeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Robotics » I-PostBOT, elona qabane lilungileyo elinokuba nalo ngeposi ngexesha lakhe
Indlela kaMartínez Palenzuela SAbino sitsho
Kubonakala ngathi yi-minion
Phendula kwiMode Martínez Palenzuela SAbino
Uthotho lweNetflix yeNursun luza kubetha eqongeni nge-17 kaNovemba